पैसाका लागि बाउले ११ वर्षे छोरीको बलात्कार गरे, आमाले खिचिन भिडियो !::mirmireonline.com
पैसाका लागि बाउले ११ वर्षे छोरीको बलात्कार गरे, आमाले खिचिन भिडियो !
एजेन्सी मंसीर ५ । पैसाका लागि संसारमा मानिसले के सम्म गर्दैन । अमेरीका जस्तो विकसित देशमा एक होस उडाउने बयान एक युवतीले दिएकी छन् ।
उनको भनाई अनुसार ११ वर्षको उमेरमा उनलाई पैसाको लागि पोर्न फिल्म बनाउन बाउले बलात्कार गरेको र आमाले भिडियो खिचेकी थिईन् । यो कथा सुनाउदा उनका आखाँ आसुले भरिएका थिए । अमाण्डा नाम गरेकी ती युवतीले एक टेलिभिजन सिरीजमा आफ्नो सनसनीपूर्ण कथा सुनाएकी थिईन् । उनीमाथि बलात्कार र सेक्सुल अव्युसकै अभियोमा उनका बाबु आमा २० वर्ष जेल सजाय भोगेर बाहिर आएका छन् ।
उनले आफ्नो बाबुआमा सामाजिक भन्दा पनि बायोलोजिकल मात्र रहेको भन्दै मन देखि आमा बाबु भन्न मन नलाग्ने बताईन । अमाण्डाका अनुसार उनलाई बाबुसगँ रिलेसन बनाउन बेला बेला मदीरा समेत पिउन लगाउने गरिएको थियो । त्यस पछि पोर्न फिल्मको म्याटर पूरा भए पछि गिफ्ट दिने गरेका थिए । यो स्थितिले आफ्नो जीवन नै खराब भएको उनले बताईन् ।
हप्तामा एक पटक यस्तो बलात्कार हुने गरेको र चाईल्ड पोर्नोग्राफीका लागि रेकर्ड गर्ने गरेको उनले बताईन् । उनले त्यो समयमा आफूलाई जस्तै अरु बच्चालाई पनि गरिन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो भनेकी छन् । उनलाई यसबाट आउने पैसा स्कुल कलेजको फिस तिर्नु पर्छ भनेर बाबु आमाले भन्ने गरेको पनि सम्झिन ।
तर उनका बाबुले अदालतको फैसला स्वीकार गर्दै यो रिलेसन बनाएकोमा कुनै अफसोच नरहेको जिकिर गरेका छन् । उनकी आमा जस्टिनले भने यो सबै आरोप बुबातर्फ औल्याएकी थिईन् ।